Iinjongo zenzelwe ukunyamekelwa kwesikhumba, akukho mfihlelo yokuba ubuhle beMedieval yaseYurophu babugubungela ubuso babo ngemigca kunye neengcezu. Ezi ndlela zilungile kuba zisinceda ukuba sibe zihle, ziphilile kwaye zilungele kakuhle. Ukongezelela, unokwenza iil lo face ekhaya, ukusuka kwimifuno ekhoyo, iziqhamo kunye nemifuno.
I-Lotion - "lotio", iguqulelwe ukusuka kwisiLatini ngokuthi "ukungcola, ukuhlamba." Le yindlela yokucoceka ngokunyamekela kwesikhumba. Ngokuqhelekileyo i-lotion ibizwa ngokuthi isisombululo samanzi sezinto ezihlukahlukeneyo ezinamandla kunye nezomzimba, iicidi zamanzi, i-jus, iivithamini, amayeza emveliso kunye nezityalo, njalo njalo.
Ngentwasahlobo, ininzi ifumaneka kuthi ukuze senze ubuso bomzimba ekhaya, ngokuzimela.
I-Lotion eyenziwa kwizigulana zamazambane ezincinane, ukuvuselela kunye nokunyusa. Thatha 2-3 ama-tubers amancinci, uhlambe kakuhle kwaye, ngokukrola kwindawo yokugcoba inyama, cwina ijusi. Kwijusi siza kufaka isiqingatha se-teaspoon ye-vodka. Sula nge-cotton swab okanye i-tampon egxinwe kwi-lotion ephekiweyo, ubhekane namaxesha athile emini. I-lotion ye-potato isusa ukucaphuka nokukhwabanisa kwesikhumba entwasahlobo nasehlobo.
I-Lotion, ukuthintela ukucwilisa kunye nokucoca. Gcoba amaqabunga ama-10 e-plantain, zihlanjululwe uze ucobe. Amagqabi atyhidiweyo athululela iglasi yamanzi abilayo kwaye ashiye ukuma isigxina seyure. Emva koko isisombululo kufuneka sikhatywe kwaye ungeze i-teaspoon yotywala nobusi. Sula ubuso bakho emva kokulala kwaye ngokuhlwa.
I-Lotion yesikhumba esomileyo nesiqhelekileyo, esilungiselelwe ukusuka kwiifalals of dogrose. Thatha enye iglasi yeepalali, uyizalise ngeoli yeoli ukuze ioli ifake i-rosehip engaphezu kwe-1cm. Emva koko, ushushu umxube kwindawo yokuhlambela ngamanzi ukuya kumbala omhlophe weepalali. Susa kwi-plate, ulinde ukuba lipholile kwaye lixakeke. Le lotion ingasetyenziselwa ukususa i-makeup.
I-Lotion ye-sensitive and prone to dry the skin from birch buds. Imifuno ye-Birch kufuneka imiswe kuqala, emva kokuxubha. Icebo lesipuni sesintsho kwisitya kwaye uthele i-vodka, iipunipoli ezi-5. Gubungela ibhodi ngesiqhekeza kwaye uyihlambulule iveki kwindawo emnyama nepholile. Emva kweveki, ukuxhatshaza kwaye usebenzise ubuso. Sula isikhumba kusasa, ngaphambi kokuba ufake iifom, uhlalutye i-lotion ngamanzi abilisiwe kwisilinganiselo se-1: 1.
Izilwanyana ebusweni, ukutshatyalaliswa kwegazi kunye nokucoca ulusu, ukusuka kwikhalendula. Thatha iincwadana ze-calendula kwaye uthele ingilazi ye-vodka. Faka ukufakelwa kwendawo kwindawo emnyama iintsuku ezilishumi, ngoko ke unzima. Ukuba ulusu luyakwazi ukuma okanye ukukhathazeka, ngaphambi kokusetyenziswa, nciphisa i-lotion ngamanzi abilayo 1: 1.
I-Lotion eyancenga, eyenziwe yintonga. Lo lotion ulunge ngokukhethekileyo ekushiseni okukhulu. Amaqabunga amancinci amancinci kufuneka athululelwe ngenye yeglasi yamanzi abilayo, ke unxinzelele isiqingatha seyure, epholile, uxinzelelo, engeza isipuni se-vodka uze ugubha ngamandla. Sebenzisa emva kokuhlamba, kunye nokukhupha isithuthuthu kunye nothuli. Ngesikhumba esibuhlungu, nciphisa i-lotion ephelileyo ngamanzi abilisiwe 1: 1.
I-Lotion, enceda ekuhlaziyeni nasekukhanyiseni isikhumba. Lungisa iipuni ezimbini ze-dill edibeneyo kwaye uzalise ngeglasi yamanzi abilayo. Emva koko kufuneka uvumele ukuba ibenze i-half half hour, ipholile kwaye yongeza i-vodka ye-vodka kwisilo. Sula isikhumba sakho kangangeentsuku ngosuku.
I-Lotion eyenziwe kwimifuno. Thatha inxalenye elinganayo ye-yarrows, i-wise, calendula iintyatyambo kunye namaqabunga ama-black currant. Yonke inqabileyo, uthele amanzi aphelayo kwisilinganiselo se-1: 10 uze ushiye ukunika ihafu yesure. Emva koko upholise i-lotion, ubunzima, ungeze i-teaspoon ye-vodka. Ukufezekisa nokucoca ulusu.
I-Lotion, ifanelekile nasiphi na isikhumba, isiphumo sokuvuselela, ukusuka kwi-nettle. Ukulungiselela lo lotion kufuneka uhlulwe ngokufanelekileyo i-50 grams yamabhotile amancinci, uthele ngeglasi yamanzi abilayo uze ushiye iiyure ezingama-2. Emva koko, pholisa uze ungeze iipuni ezimbini ezinkulu ze-vodka. Sebenzisa i-lotion ekuseni nakusihlwa.
I-lotion ikhukhamba jikelele. Khetha ikhukhamba eliphakathi kwaye uyiprogramle nge-grinder yenyama. Emva koko uthele i-½ indebe ye-vodka uze ugxininise phantsi kwesiqhekeza, ubeke kwindawo epholileyo kwiveki enye. Emva koko usisombululo. I-lotion ingasetyenziselwa ukuhlambulula ubuso, kunye nokukhenkcela, kunye nokucoca ulusu kunye nokususa i-makeup.
I-Lotion esekelwe kwi-chamomile, kwesikhumba esithenda kunye nesicathulo. Thatha i-2 tbsp. iipuni ze-chemist's daisy kwaye siya kuzalisa ngeglasi enye yamanzi abilisiwe. Masiwulethe emathunjini kwaye sivumele ukuba simeme imizuzu elishumi. Emva koko, upholile, uze udibanise i-vodka-ithandathu yepasipi. Sula ubuso bakho emva kokuhlamba emini.
Uluvo lweehapu. Thatha iinqununu ezi-6 zeehapu, zibaqheke ngeelayi kwaye emva koko uthele iglasi yamanzi abilayo. Shiya ukuma imizuzu eyi-10, uze upholile kwaye unxinxe, ungeze ngaphambili ½ isipuni se-vodka okanye utywala. Kwanele ukusula ubuso bakho amaxesha ambalwa ngosuku.
Ukunyamekela ubuso kunye namachiza asekhaya
Indlela yokuphelisa umsila omnyama phantsi kwamehlo
Indlela yokukrazula iKonopouk ekhaya ngosuku 1?
Indlela yokukhetha i-mascara efanelekileyo?
Yiba ngowona mhle kakhulu kuNyaka kaNtsva
Iifomvu ze-Apple kunye nama-almond kunye namavini
UKate Winslet ukhulelwe umntwana wesine?
Ukuthengiswa kwenethiwekhi njengoluhlobo lwezoshishino: iziPhuzo
Yiba ngumfazi wendlu okanye wenze umsebenzi
Euphorbia kunye neepropati zonyango
Indlela yokulahlekelwa ama-kilo e-5 ngeveki: 3 izidlo ezifanelekileyo kakhulu!
Indlela yokufumana umlinganiselo omncinane emva kokubeleka: icebiso lomama wabantwana abaninzi u-Alla Dovlatova
Iingcebiso zeAcne Treatment Popular
Izifundo zendlela yokuziphatha yabasetyhini
Indlela yokujonga ukuba umfana wakho uthembekile
I-TV: ingozi okanye inzuzo?